मायांले भरिएको मन जलायौ भने? - GBM
२०७७ आश्विन १३, मंगलवार ०६:४१ गते gautam buddha sandesh	0 Comments
उस्ले बारबार भन्ने गर्थि तिम्रा हजारौं साथिहरु छन आफ्नाहरु छन। अनि जति छन सबै सबै नजिकका छन। धेरै मान्छेको प्रिय तिमी ,कतै त्यिनै आफ्नाहरु को बिचमा मलाई नै हरायौ भने?कतै तिम्रो मायांले भरियको मेरो मन नै जलायौ भने? म मुस्कुराउंदै भन्न थाल्थें तिमी त मेरो प्रिय मान्छे मेरो ढुकढुकि मा धड्किरहेकि धड्कन जस्तै छ्यौ। आफ्नै धड्कन कसरी हराउन सकुंला र मैले।
त्यत्तिकैमा आफ्नो मलिन अनुहार संगै गाजल मिसियका आंशुहरु लुकाऊंदै मेरो कांधमा कोल्टे फेर्थि। झुट्टा आश्वाशन का प्रलोभन देखाउंथि अनि कहिल्यै मन जलाउने छैन भन्दै झुट्टा बाचाहरुका सपूत देखाईदिन्थि। हो आज खरानी बनेका छन उस्ले देखाएका हरेक सपनाहरु। टुटेको छ ह्रदय अनि अनायासै जलेको छ मन। यो धर्ति मा मलाई बुज्ने एउटा मुटु थ्यो त्यहि मुटुले झेल गरेपछि नै बिछोडका बेदनाले चिरिएको छ मन अनि जलेको छ मन।
उस्का हरेक चुनौति हरुलाई अंगाल्न पछि नपर्ने मन आज अनिदो रातसंग गुनासो गर्दै चुरोट को धुंवालाई अंगालि रहेको छ। त्यति चुरोट खाने मान्छे त म होइन तर घायल प्रेमिहरुका लागि सहि खुराक मानेर ,बिरामि ले औषधि खायजस्तो जबरजस्ति खान थालेको छु अचेल। जलेको मन चिस्याउन सहयात्रि बनेर ओरालि लागेका आंशुहरु सबै रित्तिसकेका छन। अनि अनायासै भतभति पोलेको छ मन। निभ्दै थियो मेरो अन्तर आत्मामा उस्ले झोसेको आगो अनि म चिसो बन्दै थियं र बल्दै थियं एक्लो तर शान्त चन्द्रमा बनेर काला रात्रिहरुमा। एकपटक होईन उस्ले बारबार धकेलिरहि मलाई अग्निकुण्ड को ज्वालामा र अनायासै जल्यो मन।यसरि जल्यो कि मुखबाट ऐया सम्म निस्कन सकेन। धुप बनेर आएका उस्का यादहरुले बिथोलिदिय अनि चर्काईरहे मन। अनि म जल्नु को कुनै बिकल्प भेटिन। जल्दै छ मन अनि गल्दै छ मन। त्यहि आगो बाट निंस्किदै छ उहि हत्यारा जस्ले मेरो मन जलायो अनि भावनाहरु को हत्या गर्यो। उहि मसान जस्ले मेरो आदर्शताको खिल्लि उडायो। प्रत्यक रातहरुमा कंकाल बनेर तर्साउंछन उस्का यादहरुले।
अनि प्रत्यक पलहरुमा मसान बनेर झस्काउंछन उस्का तस्बिरहरुले। मायांको सगरमाथा बाट पिडाको ज्वाला मा झर्यो मन अनि पिडाका ज्वाला हरुले पटपटि फुट्दै अलपत्र पर्यो मन। उस्ले निकै कष्ट गरेर जलाएकि थिई मलाई ,अब निभाउन सायद त्यति नै कष्ट झेल्नुपर्छ उस्लाई। आंफै जलेको सहन सक्ने मन उस्को कष्ट देख्न कसरी सक्थ्यो र। यादहरुले बेचैन भएर जलेको छ मन। धन्न खरानी भैसकेको छैन त्यति मै खुसि छु। त्यसैले त मैनबत्ति को साहारा लिएर जिबनका केही अधुरा अनि अपुरा सपनाहरु पूरा गर्न बाटो खोज्दै छु। डरलाग्छ कतै मैन ले आंफैलाई नै खरानी बनाईदिने हो कि। उस्ले दिएका चोटहरु बोकेर भौंतारि रहेको मन अनायासै बिरक्तिन्छ अनि भक्कानिन्छ। जस्ले झुटो मायांका सपनाहरु देखाएकि थिई आज उस्कै यादहरुले जलेको छ मन।
मैले सोंच्नै नसकेको कुरा ,मैले बडो प्रेम ले उपहार दिएको मन आज उस्ले जलाएर फिर्ता गरेकि छ। सुन्छु मैले उपहार दिएको मन जलाएर आज उस्ले एकाएक उत्सब मनाउंदै छ रे। घरिघरि सोध्न मन लाग्छ उस्लाई।
सक्छयौ हामिले बितायका एकएक समय फिर्ता गर्न? सक्छ्यौ राति अबेर सम्म स्काईप मा कुरा गर्दा पाएको आनन्द फिर्ता गर्न? सक्छ्यौ तिमिले र मैले मोबाईल मा साटेका दृश्यहरु फिर्ता गर्न? अनि सक्छयौ बिदाको दिन घुम्न जांदा बिचबाटोमा बाईक रोकेर ओत लाग्दा मेरो ओंठले गरेको तिम्रो ओंठको स्पर्शलाई आंफुसंग नराख्न? यति जवाफ दिन सक्यौ भने जलेको मन चिसियको महसुस गर्नेथियं। मेरो मन जलायर उत्सब मनाईरहेकि मेरो प्रिय मान्छे। मैले मायांको उपहार दिएको एउटा मन पनि जलाएर फिर्ता गर्ने कठै कति तुच्छ स्वभाव कि तिमी। मेरो मन जलायर बत्तिमा पुतलि रमाय जसरि रमाईरहेकि तिमी जिबनमा कसैलाई मैले जत्ति नै प्रेम गरेर हेर अनि बुझ्नेछ्यौ जीवन मा प्रेम मात्रै सबथोक हो कि होईन भन्ने कुरा। तिमिले मन जलाईदिय पछि नै लाचार बनेको हुं म।
न बांच्ने आधार भेटाउन सक्छु न मर्ने हिम्मत नै जुटाउन सक्छु। त्यसैले त अचेल हरेक रात ओछ्यानमा तिमिले उपहार स्वरुप फिर्ता गरेको जलेको मन फिंजाएर हेर्छु र धरधरि रुन्छु अनि रुंदारुंदै त्यसैको सिरानि मा भुसुक्कै निदाउंछु। कुनै सिनेमा हेर्दा सिनेमा कि नायिका मा तिमिलाई देख्छु ,तिम्रो नाम राखेर खोलियका पसल का बोर्डहरु पढ्दा तिम्रै अनुहार सम्झन्छु। अनि जलेको मन संग गुनासो गर्छु ,कतै दिमाग र आंखालाई पनि कपि राइट लाग्थ्यो भने? तिमिलाई सबै सबै ले राम्रि देखुन ,राम्रि भनुन तर आफ्नि नभनुन।अझैपनि यस्तै यस्तै अपेक्षा राखिरहन्छ तिमिले नै उपहार स्वरुप फिर्ता गरेको जलेको मन ले। हरेक रात तिम्रा यादहरुमा मर्नुको पीडा झेल्न नसकेर एक्लो रातसंग गुनासो गर्छ मन ,अनि भन्न थाल्छ मलाई मन नपर्ने गर्मि उस्को फेभरेट थियो त्यसैले त मलाई जलाएर गई।
← मनाइयो विश्व रेविज दिवस
उज्यालो रैनादेवीको नारा यसै वर्ष पुरा हुँदैछ →
सिसासको १५ औँ वार्षिकउत्सव
२०७५ माघ १८, शुक्रबार ०१:२७ गते gautam buddha sandesh	0
उपन्यास “कैली” बारे अन्तरक्रिया
२०७४ माघ २३, मंगलवार १७:२९ गते gautam buddha sandesh	0
पढाइ छोडेर पर्यटक घुमाउँदै
२०७५ जेष्ठ १०, बिहीबार ०७:४८ गते gautam buddha sandesh	0